Axmed Bide - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Axmed Suleeman Bide)
Axmed Bide Marka aad maqasho magaca Axmed Bidde ,ayaa waxaa markiiba maskaxdaada ku soo dhacaya suugaan aad iyo aad u fara badan oo kooban dhamaanba noocyada kala duwan ee ay suugaantu leedahay, sida riwaayadaha, maajilada iyo gabayadaba. Waxaa filayaa in Axmed Saleebaan Bidde uu yahay mid ka mid abwaanadii ugu qaalisan ee soo mara fanka marka laga hadlayo geyiga ay ku nool yihiin dadka Afka Somaaliga ku hadla, haddiiba aanu ahayn kan ugu horeeya.
waakuma axmed. s. bideEdit
Axmed Saleebaan Bidde wuxuu ka soo jeedaa qoys uu hibo Ilaahay u siiyey curinta suugaanta iyo guud ahaanba hal abuurnimada. Axmed S. Bidde waxay walaalo yihiin Cali Saleebaan Bidde Alle ha u naxsariisto iyo Cabdillahi Saleebaan Bidde oo labadu ah abwaano caan ku ah suugaanta guud ahaanba geyiga Somaliyeed.
Axmed S. Bidde waxaa kaloo la odhan karaa in uu yahay Wershed illaa maanta soo saarta Fanaaniin fara badan oo isku jirta rag iyo dumar, kuwii hore, kuwii dhexe iyo kuwa cusub oo illaa maanta ku mashquulsan sidii uu u soo saari lahaa kuwo hor leh.
Ahmed S. Bidde waa abwaan ku caan ah, heesaha caashaqa ah, gaar ahaan habka suuganta loogu ammaano Gabdhaha Somaliyeed iyo guud ahaanba suugaanta Jacalka xambaarsan.
lama soo koobi karo suugaanta Axmed Saleebaan Bidde, ma soo koobi karo taariikhda uu fanka Somaliyeed ku leeyahay, ma soo koobi karo inta Riwaayood iyo in Heesood ee uu Axmed sameeyey, mana soo koobi karo qadarinta uu ku leeyahay guud ahaanba ummadda Somaliyeed. Waana Abwaan qunyar socod ah miyir leh.
Axmed Saleebaan Bidde, waa Abwaan xusuus qaali ah ka mudan in guud ahaanba shacabka Afsomaliga ku hadla, gaar ahaanna wuxuu xusuus iyo xannaaneyn ka mudan yahay shacabka Reer Somaliland. Hadal iyo dhamaan Axmed Saleebaan Bidde, waxaan ku tilmaami karaa Abwaan ay ilaaween dhamaanba shacabka Somaliyeed kuwaas oo uu mudo dheer ku haasaawayey kuna hadaaqayey suugaanta uu tiray Axmed.
Ugu dambayntiina waxaa Axmed S. Bidde illaawey fanaaniintii ku nabad iyo caano maalay, kuna soo meel maray erayadii ka soo maaxday maskaxdiisa illaa maanta ku shaqaysta. Waxa aan soo jeedin lahaa in isaga oo nool loo sameeyo madxaf iyo maktabad lagu xasuusto waxna lagaga barto, laguna aruuriyo dhammaan wixii maskaxdiisa ka soo maaxday oo lala kaashado qalab casri ah si filimo loogu bedeli karo marka laga tallaabsado heerkii hore ee fadhi-ku-heeska ahaa.
Abwaan Axmed Saleebaan Bide oo ka mid ah hal-abuurada ku caan-baxay curinta heesaha Soomaaliga, Sameynta iyo jilida ruwaayadaha Soomaaliyeed ee aadka looga yaqaano dhulka Soomaalidu degto ayaa Sharaxaad balaadhan ka bixiyey Waayihiisi Jacaylka ee haleeyey, waxa uu ka tiriyey, tirada ruwaayadaha iyo heesaha uu sameeyey, isaga oo wakhtigan heerka Fanka uu taagan yahay ku sifeeyey inuu yahay mid Badhax ah, isla markaana ku ammaanay Maxamed Siyaad Bare inuu ahaa nin fanka u roonaa oo dhisayey.
Abwaanku waxa uu sida ku sheegay waraysi uu la yeeshay Wariye Mustafe Abdi Maxamed [Mustafe-janaale] oo ka tirsan shabakada Caalamiga ah ee Hadhwanaagnews, wareeysigaa oo aad u xiisa badnaa, isla markaana aanu idiin soo tabinay qeybtiisi hore, waxa uu abwaanku qeybta labaad ee wareysigan jawaab kaga bixiyey Eedeyn uu dhawaan Abwaan Maxamed C/laahi Sangub u soo jeediyey jabhadihii kacdoonka hubeysan kala horymi Dawlada Maxamed Siyaad Barre ee fadhiisinkoodu ahaa Dalka Ethiopia oo ahaa SNM iyo SSDF iyo in fankiisi uu ku qirtay doorkiisi shariifka ahaa ee uu dowladii Kali-taliska ahayd ee Maxamed Siyaad Bare ku lahaa. “Waa runtiise markii la kala jabay Askari ka tirsan Ciidamadii Dawlada Siyaad Barre ayuu ahaa xiligaa ay jabhadahaasi dagaalamayeen Abwaan Sangub dhinicii Dawladii Siyaad Barre ee kacaanka ahayd waxa uu kaga jiray Kaalin fir-fircoon, xiligaana Hargeysa ayuu joogay waxaanay fanaaniintu qiraal ka dhigeen inuu ahaa nin u wanaagsanaa dadkii Somaliland-ta ahaa ee xilligaa dhibaatadu haysatay.Hase ahaatee, dadku kala u jeedo ayuu ahaayo haddii aanu Somaliland-nahay yoolkayagu waxa uu ahaa inaanu Gobanimadayadii luntay 60-kii aanu dib ula soo noqono oo ay Somaliland noqoto dal xor ah. Arrintaasina kala goosi may ahayn ee kala gurasho ayey ahayd, SSDF-na waxay wadeen oo ay ujeedadoodu ahayd inay awooda maamulka ka qabsadaan Maxamed Siyaad Bare Sidaas ayaanay labada jabhadood ee [SNM iyo SSDF] ku kala duwanaayeen, xaqna umuu lahayn inuu labadaa is-barbardhigo oo uu simo, Maxaayeelay aad ayey u kala duwanaayeen markaa haddii uu Sangub sidaa yidhi waxaan leeyahay ‘Ninba tiisu La toosan’ arrintuna sidaa maaha sidii aan ku sheegay SNM ujeedadeedu may ahayn inay darajada iyo awooda maamul kala wareegto Siyaad Bare imikadana uma jeedno oo muraad kama lihin SSDF-na waa gobol Soomaaliya ka mid ah oo aan Weligii ka go’ayn arrintuna sida uu moodey maaha ee Sida Cad-ceeda ayey u kala cadaayeen.”. Abdihakim xabo oo Abwaan yara
taariikhdiisa oo koobanEdit
Abwaan Axmed Saleebaan Bide oo ka hadlayay sida uu uu abwaanimada iyo hal-abuurka Suugaanta uu ku bilaabay waxa uu yidhi “Aniga horta asaliyan qoyskayaga ayaa la yidhaahdaa reer Xirsi gabay. Halkaasaan ka soo hiddo raacay abwaanimada. Hadiise aad jeceshahay inaan kaaga waramo wuu jiraa jacayl dhab ah oo aniga igu dhacay. Dhibaato badan baan ka soo maray. Fankayga iyo suugaantayduna, dhaqanka , hiddaha iyo jacaylkaa u badan. Waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa sida waalidkay igu yidhi sanadkii 1943-kii, riwaayada samayntooda jyo jilitaankooda Iskuulkayagii oo Mandheera ahaa PTS (Police Training School) ayaa la odhan jiray. Iskuulkayagaasi wuxuu ahaa Iskuul tacliintiisu heer sare tahay. Inta iskuul lagu dhigtaba waan ku dhigan jirnay wixii aan Sayniska ahayn.”
Abwaan Axmed Saleebaan waxa uu si la yaab leh uga sheekeeyey wixii uu kala kulmay iyo halkii uu ku danbeeyay jacaylkii aad u ba’anaa uu u qabay gabadh uu aad u jeclaa waxaanu yidhi “Gabadhii aniga aanu is-jeclayn oo barashadaydu barbaarnimo ka kacday, jacaylkayaguna meel-dheer nala gaadhay, ayaa waxa dhacday in calafku na kala riday oo ay si lama filaan ah gabadhii u guursatay nin kale. Hase ahaatee, jacaylku illow ma lehe, labadayada oo mid walba naftiisa sidii ugu jiray. Inkasta oo aanaan yeelan xidhiidh daba socod ah, ee aan kula taliyay gabadhii inay ninkeeda iyo gurigeeda haysato, aniguna nasiibkayga aan ku socdo. Aamin iyo sharaf walaalnimana ay naga dhaxaysay Ilaahay
baa ku mahad lehe dad marnaba xumaan ku kulmayna maanu ahayn. Gabadhaasi waxa weeye gabadh garaad wacan, xarago badan, asluub fiican, muuq, joog iyo quruxna u dhalatay. Markaa waxa jirtay mar aanu kulano si lama filaan ah. Iyada oo gurigeedii leh. Balse ay ka soo duday oo ay kala yar cadhoodeen ninkeedii oo hadana ahayd goortaan kula taliyay inay gurigeeda iyo ninkeeda haysato. Waayo hadaad guri baab’iso, la arkee inuu kaaguna baaba’o. gabadhu imay odhan gurigayga ayaan baabi’inayaa. Waxaanse wax ka dareemay ninkii baanu soo kala cadhoonay. Sidaa waxaanu ee sanee suuban markaanu ku heshiinay. Bal hadana markaan ka tagay jacaylkii baa igu oogsaday. Dabadeedna aniga oo maqan oo aan is-ogayn ayaan heestan halku dhigeedu yahay [LEEXO] tiriyay oo caan ka noqotay dhulkana Somaliland degto waxaana midhaheeda ka mid ahaa sidan.
“Innagoo lamaano ah. Iyo laba naf qaybsi leh. Adigaa is lumiyoo Isu loogay cadawgoo, Libintaada siiyee, Waadiganse liitee, Lexadu ku sidatee, Hadba laan cuskanayee, Liibaanteeda aduunyada Ruuxna laasan maayee. Maxaa lulay naftaadii. ++++++++++++++++
Waa laac Aduunyadu Labadii Walaalo ah Midba maalin ladayo Ruuxi u liil Galay Lama loolo dharagoo Lugooyada madeysee Liibaanteeda aduunyada Ruuxna laasan maayee. Maxaa lulay naftaadii +++++++++++++++ Adiguba laf iyo jiidh Waadigii idlaadee liqiwaayey oontee Adiga liscaanood iyo Laas xareediyo Laydh iyo hadh jiifee. Waadiganse liig liig Laasimay ugaadhee Waaqlada u leexde Liibaanteeda aduunyada Ruuxna laasan maayee. Maxaa lulay naftaadii. ++++++++++++++++ Dhaaxaad ladnaan Rays Sida aad aar libaax tahay Talaabada ladhaysoo Ana lahashadaada iyo Ladiwaayey jiifoo Liidnimo i-raacdee Lalabaha habeenkiyo Ma libdhaan jacaylku Ruux uu laba dibleeyaa. Liibaanteeda aduunyada Ruuxna laasan maayee. Maxaa lulay naftaadii.”
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Axmed_Bide&oldid=206763"
Last edited on 2 Nofeembar 2020, at 15:18
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 2 Nofeembar 2020, marka ee eheed 15:18.